बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी छ ? चिन्ता नलिनुस्, यसो गरे तपाईंमा सुधार आउँछ « dainiki
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२४
५ कात्तिक, काठमाडाैँ । कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन! आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले ध्यानको नियमित अभ्यासले कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती गर्ने आदत घटाउन मद्दत पुग्ने देखाएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२४